တရှိုက်မက်မက် ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 10:11 PM | No မှတ်ချက် | မှတ်စုကြမ်း
"အိုး ဒါတွေက ရှေးလူတွေအယူ...။ ကျွန်တော်တို့ကရှေးလူမှ မဟုတ်တာ!” ဆုဝေ ကို့ ကို စိတ်တိုတိုဖြင့် ထအော်မိသည်။ ကလေးဆန်သည့် ကောင်မလေးကို သူအရမ်း ချစ်မိသွားသည်။ “ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ... ကိုယ်တို့တွေ ခိုးပြေး ကြတာပေါ့...။”
ကောင်မလေးနှုတ်ခမ်းနုနုကို ခပ်ဖွဖွ ငုံ့နမ်းလျက် “နတ်ပြည်ထက် ကောင်းတဲ့ အလှတရားတွေကို ကိုယ်ဖန်ဆင်း ပေးပါ့မယ့် ကောင်မလေးရယ်...။” ဟု
Neoက ကတိပေးစကားကို ခပ်ဖွဖွဆိုလိုက်လေသည်။ ထိုညက ကြယ်တာယာတွေအစုံလိုက် အစုံလိုက် မှောင်မိုက်နေ ခဲ့ပေမယ့် လူသား ၂ ယောက် အတွက် အတောက်ပဆုံးည...။
ရယ်ချင်မိသည်။ ဒီလို ကတိတွေနဲ့ သစ်ရွက် ဘယ်နှစ်ရွက်တောင် လှုပ်ခဲ့စေခဲ့သလဲ ကိုရယ်။ “ယုယမှုက မြုပ်နှံခြင်းဆို မြေကြီးထဲနေတာပဲကောင်းပါတယ် ကို။ ကောင်းကင်နဲ့ ဘုရားသခင်ဆီ သွားဖို့ မျှော်မှန်း ထားရအောင် အရူးမှမဟုတ်တာ။ ခံစားချက်နဲ့ ခွက်တလုံးလေ။”
ဆုဝေဆီက စွပ်စွဲသံ ခြယ်ထားတဲ့ ထေ့လုံးလေးတွေကြားရတာ ဒါ ပထမဆုံး ဖြစ်သည်။ "အဲ့ဒါ လုပ်ကြံဖန်တီးမှုတွေပါ ကောင်မလေးရာ။ တကယ်တော့ လေပြည်လေးတွေ မင်းလည်တိုင်ကို ဖြတ်ပြေးရင်တောင် ကိုယ်က ကြိတ်ပြီး သဝန်တိုနေတဲ့ကောင်ပါ။ အချစ်ဆိုတာ သဘာဝပါပဲ ကောင်မလေး… သဘာဝထဲကမှ အလှပဆုံးသဘာဝပေါ့… "
ဆုဝေဆီက ခပ်မာမာတောက် တစ်ချက် ခေါက်သံ နှင့် အတူ “လှေသမားခေါ်မှ ရောက်မဲ့အရပ်ကို စာရင်း ကြိုသွင်းထားတာ ကို မိုက်မဲတာမဟုတ်ဘူးလား! မိုက်မဲမူတွေထဲမှ အထီးကျန်ခြင်းတွေ အရူးတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်တွေ မထည့်သင့်ဘူး။”
လေးတွဲ့စွာ ခေါင်းခါရင်း "စိတ်ကူးတွေ အိမ်မက်တွေဆိုတာလက်တွေ့ရဲ့ ရှေ့ပြေးနမိတ်ကောင်တွေပါ… လူ တစ်ယောက် က လူတစ်ယောက်ကို ချစ်တာ မိုက်မဲမှုလို့ပြောရင်… မမိုက်မဲတဲ့သူတွေဟာ
ခြောက်သွေ့ စွာ အထီးကျန်နေတဲ့ သူတွေပဲဖြစ်မှာပါ…ကောင်မလေးရာ...”
ဆုဝေက neoကိုသွေးအေး ရှတစွာ ကြည့်လျက် "ရှေ့ပြေး နမိတ်ဆိုပေမဲ့ ဒီတိုင်းလေးပဲကြည့်ဖို့ အကောင်း ဆုံး ပြကွက်တွေပါ။ ဖြစ်တည်ခြင်း တွေ ပဲရှိနေပြီး ပျောက်ဆုံးမှုမဟုတ် တော့ဘူး။ ဖန်ဆင်းရှင် တားမြစ်ထား တာတောင် ချိုးဖောက်တဲ့ အာဒံနဲ့ဧဝ လိုမျိုး အကြီးမားဆုံးမိုက်မဲမှု...။ တောက်...!”
ဝရံတာမှာ ဆေးလိပ်ငွေ့တွေ ရှိုက်ထုတ်နေတဲ့ ကို့ဘေးမှာ ထိုင်ငေးနေတဲ့ ကျမဆုဝေ...။ ဒီကနေ့ ကိုနဲ့ စိတ်ဆိုး တာ ၂ ပတ်ပြည့်တဲ့နေ့... လတစ်ဝက်ပြည့်တဲ့နေ့။ မပြည့်ဝသေးတာက ဆုဝေနဲ့ Neo တို့ရဲ့ အချစ်တွေ... အားပြိုင်နေဆဲလေ...။ တိတ်ဆိတ်မှုကို ကို့ရဲ့တိုးညှင်းတဲ့ ညည်းသံက ခပ်ပါးပါးလေး ဖြိုခွင်းလိုက်တယ်....။ “ကိုယ်တို့တွေ မဟုတ်သေးဘူး ကောင်မလေး… ဖြစ်ပြီးရင် အရာရာပျက်နေတာ ကိုယ်သဘောပေါက် တာပေါ့…။ ဒါပေမယ့်… ပြန်ပြီးတိုင်း မင်းအပေါ်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့အချစ်တွေဟာ စမ်းချောင်းထဲက ရေတွေ စီးနေသလိုပါပဲ…။ ရှေ့ရေနဲ့နောက်ရေ မတူပေမယ့်… တသားတည်းလို့ ထင်စေနေတာမျိုးလေ…။ကိုယ့်အချစ်ဟာလည်း ပျက်ပြီးတိုင်း လျင်မြန်စွာ ပြန်ဖြစ်နေပါတယ်။ မင်းအပေါ်မှာပေါ့...။” “ မိုက်မဲမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲက ပျက်ခြင်း ကွဲခြင်း ဆုံးရှုံးခြင်းတွေက အစားထိုးမရနိုင်ဘူး... ကို...။”
ဖင်ဆီခံကိုထိလာသောမီးကို ပြာခွက်ထဲ ညင်သာစွာ ထိုးချရင်း... "မဟုတ်ဘူး ကောင်မလေး… အဲဒါ ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ကောက်ကျစ်မှုပါ… စားချင်အောင်လို့ စားစရာရှိတဲ့နေရာကို မစားရလို့ တားမြစ်ပြ လိုက်တာပါ...။”
"ဆုဝေ! မမိုက်နဲ့! ကိုယ့် အနားကို နောက်ဆုံး အခွင့်အရေး အနေနဲ့ ပြန်လာပေးပါ ဆုဝေ။ ကောင်မလေး ပြန်လာဖို့ ကိုယ် ဘာမဆို ပေးဆပ်မှာပါ။ အစားထိုးစရာမလိုအောင် အဆုံးအစမဲ့ကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ မင်းကို ပွေ့ဖက်ထားမှာပါ။ လှစ်ဟာမှုကို မင်းမမြင်လိုက်ခင်မှာပဲ ကိုယ်က အချစ်နဲ့ဖုံးဖိထားနိုင်လိုက်မှာပါ။ ပြန်လာပါ ဆုဝေ။ မဟုတ်တာတွေ လျှောက်မလုပ်စမ်းနဲ့။”
“စိတ်မနိုင်ခြင်းရဲ့ဒုက္ခက နောက်ဆက်တွဲ လူတွေ ရဲ့လက်ညှ်ိုးတွေကိုမျှော်နေသလို အချစ်ကလဲ ဖြစ်ပျက် နေတာဆို လစ်ဟာမှုကို ဘယ်လိုဖုံးကွယ်နိုင်မလဲ။ တခြားဝတ္ထုလား ဒါမှမဟုတ် မေ့မြောခြင်း လား...ကို....” "မဟုတ်ဘူး…ဆု…စိတ်မနိုင်တာမဟုတ်ဘူး…
“လစ်ဟာမှုဟာ ပေါက်ဖွားခြင်းကို ဖြစ်စေတာပါ… နေရာလွတ်မရှိရင် ဘာမှ မွေးဖွားလို့မရဘူးလေ… ကိုယ်တို့က အချစ်ကို လစ်ဟာမှု နယ်ထဲမှာ မွေးတဲ့ပုံစံမျိုးပါ… ကောင်မလေး ဒါကို မင်းသေချာ နားမလည် သေးဘူး… ကိုယ့်ရင်ခုန်သံ ပေါ် မင်းခေါင်းလေးမှေးစက်ပြီး နားထောင်လိုက်ရင် အရာအားလုံး